सोलार बाल्ने धार्चे र चुमनुब्रीको सपना साकार बनोस् | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
Published On : २१ श्रावण २०७७, बुधबार ०९:३६
देश बनाउने पनि निर्माण व्यवसायी, देश बन्न नदिने पनि निर्माण व्यवसायी । यसमा दोराय छैन । पूर्वाधार निर्माणको काम गुणस्तरीय बनाउने कि गुणस्तरहीन बनाउने ? त्यो पनि उनीहरुकै हातमा हुन्छ ।
अहिले देशव्यापी हेरौँ, मेलम्ची खानेपानीको हालत, सयौं पुलको हालत, हजारौं सडक निर्माण र स्तरोन्नतिको हालत, सिँचाई, खानेपानी तथा भवन निर्माणको हालत जताततै अलपत्र छ ।
अलपत्रको हिस्सेदार यदाकदा कर्मचारी पनि हुनसक्छन् तर प्राय निर्माण व्यवसायीकै कारण काम अलपत्र भएका हुन्छन् । कतै काम सुरु नै नभै बजेट फ्रिज भए गरेको छ ।
सन्दर्भ हो, धार्चे र चुमनुब्री गाउँपालिकामा सोलार बाँड्ने काम हुन नसकेको । केन्द्रीय विद्युत प्रशारण लाइन पनि नपुगेको, लघुजलविद्युत आयोजनाको बत्ती पनि नपुगेका धार्चेका केही गाउँ र चुमनुब्रीका केही ठाउँमा प्रदेश सरकारले गत आर्थिक बर्ष सोलार प्रविधि वितरण गर्न बजेट बिनियोजन गर्यो ।
स्थानीयबासीले सोचे, अब घरमा उज्यालो बाल्न पाइने भयो तर ठेकेदारले सोलार उपकरण ढुवानी नै गरेनन् । जसका कारण सरकारले गरीबका झुपडीमा सोला प्रविधिका उपकरण बाँड्न सकेन । जसले गर्दा उनीहरुलाई हात्तीआयो हात्ती आयो फुस्सा भएको छ ।
‘गरिबलाई दिन्छु नभन्नू’ भन्ने नेपाली आहान छ । दियालोकै भरमा गुजारा चलाएकाहरुलाई सोलार बत्ती दिन्छौँ भनेपछि उनीहरुमा खुशीको सीमा रहेन । तर बर्ष बित्यो, पाउन सकेनन् । विद्यमान जटिलताहरुको समाधान गरी उनीहरुका लागि चालु आर्थिक बर्ष घरघरमा सोलार प्रविधि जडान गर्नुपर्छ ।